Wasiir Maareeye “Maamulada waxaan leeyahay masuuliyad ma’ahan inaad tiraahdaan Xukuumadda xiriirka ayaan u jarnay” | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiir Maareeye “Maamulada waxaan leeyahay masuuliyad ma’ahan inaad tiraahdaan Xukuumadda xiriirka ayaan u jarnay”
Xukuumadda Somalia ayaa waxa ay ka hadashay Maamul Goboleedyada dalka ka dhisan ee qaarkood ku dhawaaqa inay xiriirka u jareen Dowladda Federaalka Somalia.
Maamulka Jubbaland ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray Dowladda Federaalka Somalia, xilli maamulkaasi uu ka cadhooday mooshin Baarlamaanka ay ku kala direen Golaha wakiilada Maamulkaasi.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Somalia Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” oo Saxaafadda kula hadlaayay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inaysan masuuliyad aheyn maamulada ku dhawaaqaya xilli waliba inay xiriirka u jareen dowladda dhexe.
Wuxuu sheegay in Xukuumadda aysan u jawaabeyn maamuladaasi sidoo kalena aysan laheyn dhanka Xukuumadda inay xiriirka u jarayso Maamuladaasi, wuxuuse sheegay in Xukuumadda ay ka shaqeynayso sidii kalsoonida Maamuladaasi loo dhisi lahaa.
“Waxaan leeyahay Maamulada dalka ka dhisan ee odhanaya Xukuumadda ayaan u jarnay xiriirka taasi masuuliyad ma’ahan qofka hadlayaa waa inay masuuliyad ka muuqataa, Xukuumadda waxa ay ka shaqeynaysaa sidii loo dhisi lahaa kalsoonida Maamulada” Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Somalia.
Inta badan Erayga ah in xiriirka loo jarayo Dowladda Federaalka Somalia waxaa looga bartay maamulka Puntland oo dhowr mar ku dhawaaqay inay xiriirka u jareen dowladda Federalka Somalia.
Xukuumadda Somalia ayaa ku mashquulsan qancinta Maamulada hadal adeega lasoo hortaagan Dowladda dhexe ee dalka.